Ukusebenza komgaqo wokuvula umlilo
Ngokuhlengahlengisa uxinzelelo kunye nokutshintsha ukuhamba, igesi iyakhutshwa kwisimpu semipu kwaye itshiswe ukuze yenze ilangatye lobushushu eliphezulu lobushushu lokufudumeza kunye nokudibanisa. Ngokumalunga nolwakhiwo, zimbini iintlobo zamandla okubamba ngesandla, enye yibhokisi yomoya edityanisiweyo yesundu kunye nefoto ephezulu ...Funda ngokugqithisileyo »
Inkqubo yokusebenza yokhuseleko lwencindi yerhasi engamanzi
1. Uvavanyo: qhagamshela onke amalungu umpu wokutshiza, qinisa umbhobho wegesi, (okanye uqinise ngocingo lwentsimbi), qhagamshela isinxibelelanisi segesi esityibilikisiweyo, uvale isitshizi sompu wokutshiza, yikhulule ivalve yesilinda esinegesi, kwaye ujonge ukuba ikhona ukuvuza emoyeni kwindawo nganye. 2. Ucinezelo: ukukhululwa kancinci ...Funda ngokugqithisileyo »
Ilangatye luhlobo olutsha lweempahla zangaphandle, ezizezempahla yokupheka yasendle. Ibizwa ngokuba yi "Torch" kumazwe angaphandle. Luhlobo lwesixhobo sokufudumeza umlilo esivela kwitanki yegesi ebusane. Izixhobo zokupheka ebaleni zibhekisa kwintloko yeziko kwaye f ...Funda ngokugqithisileyo »
Ngomhla wokuqala we-2020, abasebenzi be-Kalilong 100 bahlanganisene ukuba bazokutya isidlo sangokuhlwa .Ngexesha lesidlo sangokuhlwa, siceba imidlalo, ukucula, ukudanisa njl. Umphathi Jikelele uMnu Chen wenza intetho, kwaye uncoma oogxa bakhe abasebenza nzima, kwaye ubanike ibhonasi yokuqhubeka nemizamo yabo ngo-2020. Funda ngokugqithisileyo »
2020, NGOKWENENE UNYAKA OBODWA
U-2020 ngunyaka okhethekileyo, ukuqala okunzima kakhulu .ukuqhambuka kweVID-19, iphondo laseHubei lavalwa iinyanga ezintathu, isiqingatha soogxa bethu baseHubei abakwazi ukubuyela emsebenzini. Bambalwa abasebenzi ababuya ngoMatshi 1 ukuqala ukusebenza phantsi koxinzelelo olukhulu. Zininzi ii-odolo ezibekwe ngoovimba ...Funda ngokugqithisileyo »
Emva kokufumana isatifikethi se-CE kwi-Intertek nakwi-TUV, sifumana ingxelo yovavanyo entsha esemgangathweni ye-EN521. Funda ngokugqithisileyo »
UKHUSELEKO OLUKHUSELEKILEYO KUPHELA LUNENQAKU ELIQALAYO, ALUKHO SIPHELO
yintoni pridcution ekhuselekileyo: Iprodcution ekhuselekileyo bubunye bokhuseleko kunye neprodcuton, kwaye injongo yayo kukukhuthaza imveliso ngokukhuselekileyo, kunye neprodcutionmust be safe. Ukwenza umsebenzi olungileyo kukhuseleko kunye nokuphucula iimeko zokusebenza; ukunciphisa ilahleko yepropathi kunokunyusa ukusebenza kweshishini, kwaye ngokuqinisekileyo ...Funda ngokugqithisileyo »
Siza kuya China Hardware Show e Shanghia ukususela Oct 10 ukuya 13 .Wamkelekile umnquba yethu! Funda ngokugqithisileyo »
ISAZISO SEHOLIDI SOSUKU LWESIZWE KUNYE NOMthendeleko we-MID-AUTUM
Ngokwamalungiselelo eholide yesizwe, edityaniswe nemeko yenkampani yethu, amalungiselelo eeholide zezi zilandelayo: Kuya kubakho iintsuku ezintathu zokuphumla ukusuka nge-1 ka-Okthobha ka-2020 ukuya nge-3 ka-Okthobha. Yiya emsebenzini ngo-Okthobha 4. Ndikunqwenela iholide emyoli. Funda ngokugqithisileyo »